သျှမ်းနီလူမျိုးတုို့၏ စည်တော်နိုင်ငံ ~ Shannilay
တုိုင်းလျဲန်ခေါ် သျှမ်းနီ တုိုင်းရင်းသား လူမျိုးများသည် မုိုးကောင်း ၊ မုိုးညှင်း၊ မုိုးမိတ်၊ ၀န်းသုို့ သျှမ်းအခေါ် မိန်းကောင်း (အုိုးစည်မြို့)၊ မိန်းယမ်း (ဗျိုင်းမြို့)၊ မိန်းမိတ် (ဓါးမြောင်မြို့) ၀မ်းဆေ (ကျားကွင်းမြို့) စသည့် မြို့ပြ လက်နက်နုိုင်ငံငယ် ( City State ) များကုို ထောင်လာ ခဲ့သော သျှမ်းညီနောင် သုံးဦးမှ ဘုိုးတော် ဂနာလရာဇ်တုိုင်း ရွီးရွှမ်း ဘုရင်မင်းမြတ် ဦးတည်မင်းထံ လူသူ လက်နက်များ တောင်ခံကာ စတင်တည်ထောင် လာခဲ့ကြရာမှ ပေါက်ဖွားဆင်းတက် လာသော သျှမ်းမျိုးနွယ်စု များဖြစ်သည်။ (သျှမ်းသမုိုင်းက အခုိုင်အမှာပြဆုိုသည်။)
ရှေးသမုိုင်း သက်သေ အထောက်အထား အခုိုင်အမာရှိခဲ့သော သျှမ်းနီလူမျိုးများ အကြောင်းကုို တင်ပြရပါလျှင်..
သျှမ်းနီနုိုင်ငံတော်ကုို အချို့သမုိုင်းဆရာများက မုိုးကောင်းခေတ် ဟုခေါ်ဆုို ရေးမှတ် ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ့သမုိုင်း တလျှောက်တွင် မုိုးကောင်း မုိုင်းညှင်း၊ မုိုးမိတ်၊ သောင်သွတ်၊ ခန္တီးလုံ၊ ဟုမ္မလင်း၊ တွင်နေထုိုင်ကြသော သျှမ်းနီ များကုို မောသျှမ်းကြီးများဟုလည်း ရေးလေ့ရှိသည်။
ရှေးခေတ် ဝေါဟာရအားဖြင့် ကျိုင်းဟုန်ဟု ခေါ်သော မုိုးမိတ်မြို့ကုို ဗုဒ္ဓသာသနာ သက္ကရာဇ် မတိုင်မီ ၁၄၈ (ခရစ်သက္ကရာဇ် မတုိုင်မီ ၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနုိုင်ငံ သမုိုင်းအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဌ (၂) နုိုင်ငံခြား ဘာသာ သိပ္ပံကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ဟောင်း ဆရာကြီး ဒေါက်တာ စုိုင်းအောင်ထွန်း ရေးသားပြုစုသော တုိုင်းလူမျိုးစုများ ပြန့်နှံ့ နေထုိုင်ပုံ သမုိုင်း စာတမ်းတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၂)တွင် စကုဒေသသည် AD 1120 မှစ၍ ခန္တီးသျှမ်းတို့ နေထိုင်ရာဒေသ ဖြစ် ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
၁၈၃၃ တွင် မဏိပူရသုို့ ရောက်ခဲ့သော မေဂျာပင်ဘာတန်သည် သျှမ်းသမုိုင်း မှတ်တမ်းတစ်စောင်ကုို ရရှိခဲ့ပြီး ဘာသာပြန်ဆုိုခဲ့ရာ ၎င်းမှတ်တမ်းအရ ပေါင်မင်းနုိုင်ငံ အမည် ပေါ်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ အဆုိုပါ မှတ်တမ်းအရ ၁၃၃၂ တွင် ပေါင်မင်းနုိုင်ငံကုို အုပ်စုိုးသူ (မုိုးကောင်းစော်ဘွား ) ကုိုဆုိုလုိုခြင်းဖြစ်သည်။
သျှမ်းစည်တော်နိုင်ငံ (Country of Drum)
လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူ့သမုိုင်းတုိုးတက် ပြောင်းလဲလာမှုကုို လေ့လာရာတွင် မိသားစု အစုအဝေးမှ တဖြည်းဖြည်း တုိုးတက်လာပြီး မြို့ပြနုိုင်ငံ (City State )၊ မင်းပြည်ထောင် (King Dam)၊ လက်နက်နုိုင်ငံ (Empire)၊ ဟူ၍ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။
1.သျှမ်းလူ့အဖွဲ့အစည်း (Shan Society)
2.အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား ( Nobility Class) ဟူ၍လူတန်းစား နှစ်ရှိသည်။
အုပ်ချုပ်သူကုို စော်ဘွား (Soahpa) မျိုးရုိုးသည် တော်ဝင်မိသားစုဖြစ်သည်။
မျိုးရုိုးအမည်ကုို နာမည်ရှေ့တွင် (Soa, Hkun, Nang) စေ၀်၊ ခွန်၊ နန်း စသည်ဖြင့် အမည်မှည့်ခေါ်သည်။
Tai Leng သျှမ်းနီ စော်ဘွားများသည် Golden Tiger (Hkam Hso) ရွှေရောင်ရှိသော ကျား အမည်ကုို ခံယူ သည်။ စော်ဘွား အခြေစုိုက်နေထုိုင်ရာနေရာကုို (Haw) (ဟော်) ၊ ဟုခေါ်သည်။
မြို့(Mo”ng) ကုိုမိန်း ရွာကုိုဘန့် သုို့မဟုတ် မှန့် နှင့် (Bann / Mann) ရွာများကုို အုပ်ချုပ်သည်။
အမတ် (Amat) များကုို အတွင်း၊ အပြင် ခန့်ထား၍ ၎င်းတုို့အောက်တွင် စော်ဘွားခန့်ထားသော ရွာကြီးအမှူး (Paw Maing) ပေါ်မိန်း များကုို ၊ ဟိန် (Assistant Administrative Officer) များခန့်ထား အုပ်ချုပ်သည်။
စော်ဘွားနှင့် အမတ်များသည် မျိုးရုိုးစဉ်ဆက် ဆက်ခံနုိုင်သည်။
မုိုးကောင်းစော်ဘွားပုိုင်နယ် (ဥဒေဂရိတုိုင်း) တွင် မုိုင်း ၉၉ လုံးရည်။ အမှတ်တံဆိပ်မှာ သျှမ်းအုိုးစည် ဖြစ်သည်။ မုိုင်းညှင်းစော်ဘွားပုိုင်နယ် (အာဋ၀ီရတုိုင်း) တွင် မုိုင်း ၃၃ လုံးရှိသည်။
2.သာမန်လူတန်းစား (Ordinary Clss)
လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်သော လယ်သမားများ ဖြစ်သည်။ နား (Na) ခေါ် လယ်မြေများကုို စုိုက်ပျိုးကြသည်။
3. အနှိမ့်ဆုံးလူတန်းစား (Lower Class)
ငါးဖမ်းသူ၊ ၀က်မွေးသူ၊ အရက်ရောင်းသူ၊ သားသတ်သမားများ ပါဝင်သည်။
အမိအဖ မျိုးရုိုးနှင့် အကြိမ်အရေအတွတ်ကုို လုိုက်၍ “လံရေ၊ လအီ၊ လအမ်၊ လအုို့၊ လအစ်၊ လပုို၊ လမုို” ဖြင့်၎င်း၊ သားသမီးများအား အုိုက်၊ ယီ၊ နန့်အီ (ဒုတိယသမီး)၊ နန့်အုိုင် (စတုတ္ထသမီး) ဟူ၍၎င်း၊ ယောင်္ကျားလေးများကုို အုိုက်ညီ၊ အုိုက်ဆယ်၊ အုိုက်ပန် ဟူ၍ ကြီးစဉ်ငယ်လုိုက် မည့်ခေါ်သည်။
နှစ်သစ်ကူးကာလသည် နတ်တော်လ (လင်းစိန်း) ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးလမှာ တန်ဆောင်မုန်းလဖြစ်သည်။ အရှေ့နွယ် တုိုင်းလျဲန် (သျှမ်းနီ) အမျိုးသားများသည် သျှမ်းဘောင်းဘီ ရှည်ကုို၎င်း၊ အနောက်နွယ် တုိုင်းလျဲန်တုို့သည် ပုဆုိုးကုို၎င်း ၀တ်ဆင်သည်။ အင်းကွတ်၊ ထုိုးကွင်း၊ မင်ကြောင်ကု အမျိုးသားများတွင် ထုိုးကြသည်။
ဆောက်ဆန်လုံနတ် (မုိုးကောင်းအရှင်ကြီး) သည် စောမောင်အုိုင်နှင့် အကုိုစောလုံ ငန်းဘွတုို့ တမလွန်တွင် သျှမ်းရုိုးရာတန် အဖြစ် ကုိုးကွယ်သည်။ နတ်ကွန်းကုို တဆောင်စီ သီးခြင်းဆောက်လုပ်၍ ကျွဲကုို သတ်ကာ အူ၊ အသဲ အမြှစ်၊ အသားများကုို တွဲလောင်းချိတ်ပြီးပူဇော်ပသသည်။ ၎င်းနတ်ကုို သျှမ်းပြည် အရှေ့ပုိုင်း တွင်လည်း ပူဇော်ပသ၏။
မုိုးကောင်းမြို့စောင့်နတ် (Mong nat of Mogaung) များမှာ-
Chow Pya Ho Seng
Chow Su Kap Ha
Chow Sam Loung Hue Mong ဟူသော ညီအကုို ၃ ပါးကုို ၀ါးနှင့် ပြုလုပ်သော နတ်စင်သီးခြား စီဆောက်၍ ကုိုးကွယ်ကြသည်။ မြို့ကုိုကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံ ထားသည်။
၁. နေရာသစ်ရှာ၍ အခြေတကျနေထုိုင်လုိုခြင်း။
၂. ပင်ကိုယ်စိတ်၌ စစ်တုိုက်ခုိုက်လုိုစိတ်ရှိခြင်း။
၃. မြောက်ဖက်အရပ်မှ တုိုက်ခုိုက်လာမည့် ရန်ကြောင့် ယူနန်တောင်ဖ်နုင့် အနောက်ဖက်ကုို ရွှေ့ပြောင်း သည်။ ပထမအကြိမ်ရွှေ့ပြောင်းသော (Tai Long/ Great Tai) သျှမ်းကြီးများ၊ နောက်အကြိမ် ရွှေ့ပြောင်းသော ( Tai Noi/ Little Tai) သျှမ်းကလေးများဟူ၍ နှစ်မျိုးအနက် သျှမ်းကများရွှေ့ပြောင်းမှုက သမုိုင်းတွင် ပုို၍အရေးပါသည်။
တရုတ်သမုိုင်းဦးဖော်ပြချက်အရ 128.BC တွင် မြန်မာနုိုင်ငံမြောက်ပုိုင်းကုိုဖြတ်၍ အန္ဒိယ- ယူနန် သွားရန် လမ်းကြောင်းကုို ဖော်ပြသည်။ AD.69 ၌ Yung Ch’ang ကုို ယူနန်နယ်တွင် ထူထောင်သည်။
AD.342 ၌ Yung Ch’ang ကုို (Han dynasty) တရုတ်တုို့သိမ်းသည်။
ယူနန် အနောက်ပုိုင်း ဖြစ်သော မြန်မာနုိုင်ငံ မြောက်ပုိုင်း ဒေသမှ ကြံ၊ ဆင်၊ လိပ်ခွံ၊ ကျောက်စိမ်း၊ ပယင်း၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဆား၊ သစ်ကြပုိုး၊ ၀ါဂွမ်း တုို့ထွတ်ရှိသည်။
AD.650 ၌ နန်ချောင် (Nan Mao) မြို့တော်ကုို တာလီ (Tali) တွင် Hsi-Nu-Lo ကထူထောင်သည်။ AD.750 ၌ နန်ချောင်ဘုရင် ကူလူဖန် (Ko-lo-feng) လက်ထက်တွင် ပျူနုိုင်ငံကုို ဖြတ်သော အန္ဒိယ၊ ယူနန်သွားရာလမ်း များစွာပွင့်သွားသည်။
၎င်းလက်ထက်တွင် ခန္တီးလုံဒေသကုို တိဘက်ရန်ကာကွယ်ရန် ခံမြို့အဖြစ်တည်ထောင်သည်။ AD.1000 ၀န်းကျင်၌ ခန္တီးလုံသည် နန်ချောင်တုို့၏ လက်အောက်ခံပြည်နယ် တခုဖြစ်လာသည်။
AD.832 ၌ နန်ချောင်တုို့ ပျူ (သရေခေတ္တရာ) နှင့် AD.835 မွန်(ပဂေါ်) ကုိုဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးသည်။ AD.1010 ၌ သျှမ်းများသည် ရမည်းသင်း၊ ပျဉ်းမနား၊ မိတ္တီလာ၊ မကွေး၊ ကျောက်ဆည်၊ မန္တလေးနှင့် မြောက်ဖက်နယ်များကုို လွှမ်းမုိုးခဲ့သည်။
AD.1253 တွင် ကူဗလုိုင်ခန် (Kublikhun) သည် နန်ချောင်နှင့် AD.1287 ပုဂံ (Pagn Dynaty) ကုို ၀င်ရောက်သိမ်းပုိုက်သည်။
ထုိုအချိန်မှ သျှမ်းတုို့တောင်ဖက်နှင့် အနောက်ဖက်သုို့ ရွှေ့ပြောင်းရာ AD.1285 တွင် ဗန်းမော် (Man Maw) ကုို၎င်း၊ မုိုးမိတ် (Mong Mit)၊ အုန်းဘောင် (On Baung)၊ Hsenwi မြို့များကုို တည်ထောင်သည်။ ထုိုမှ မုိုးကောင်း (Mong Kawng)၊ မုိုးညှင်း (Mong Yang)၊ ၀န်းသုို (Waing Hso)၊ ကသာ (Kat Hsa) မြို့များ တည်ထောင်သည်။ AD. 1296 ခန့်လောက်တွင် မုိုးညှင်းသုို့ သံစေလွှတ်ခြင်းကုို တရုတ်မှတ်တမ်း များတွေ့ရှိရသည်။
Tai Leng စော်ဘွားဆက်များ
(AD. 1340-1371) Sao Hso Khan Pha/ Hso Kip Hpa (Si Ke- Chinese text) မုိုင်းမောကုို အုပ်စုိုးသည်။
ကျောက်ဆည်နယ်တွင် အခြေချသော သျှမ်းညီနောင်သုံးဦးကုို ဇင်းမယ်ကကူသလုို၊ မုိုင်းမောသည် စစ်ဆောင်ပန္နားနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့သည်။ ၎င်း၏ညီဖြစ်သူ Sao Hsam Long Pha သည်
ဗန်းမော်မှတဆင့် မုိုးကောင်းတွင် တပ်မကုို အခြေချပြီး ဒုတိယမြို့တော် တည်ထောင်သည်။
ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကုို ဖြတ်ပြီး ကဘောချိင့်ဝှမ်း (Kabaw Valley)၊ ချင်းနယ်မြောက်ပုိုင်း၊ မဏိပူရ၊ ကချာ၊ အာသံ (Ahon) ကုို သိမ်းသွင်းအခြေချ နေထုိုင်ခဲသည်။
Sao Hsam Long Pha လက်ထက် မုိုးကောင်းကုို ဗဟုိုပြု၍ မိုင်း ၉ ၉ လုံးအုပ်ချုပ်သော မြောက်ပုိုင်းသျှမ်းများသည် ၎င်းတုို့ကုိုယ်ကုို TAI LENG ( သျှမ်းနီ) ဟုခေါ်သည်။
အခြားသူများက မြန်မာဆန်သော Tai Leng သျှမ်းနီများကုို ၁၉၆၂ နေ၀င်းအစုိုးရမှ သျှမ်းဗမာ (Shan B’mah) ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းမျိုးနွယ်စုမှ မြောက်ဖက်စွန်းသုိ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထုိုင်ကြသူများကုို Tai Khamti တုိုင်းခန္တီးဟုလူသိများသည်။
Tai Long, Tai Mao နှင့် Tai Nu စသော သျှမ်းမျိုးနွယ်များသည် ဗန်းမော် (Man Maw)၊ မုိုးမောက် (Mong Mauk)၊ ၀ုိုင်းမော်(Waing Maw)၊ ခပ်ချို (Kat Kiao)၊ နမ္မား(Nan Ma)၊ နမ္မတီး(Nan Ti)၊ မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း စသည့် ဒေသများတွင် နား(Na)ခေါ် လယ်ယာမြေများ ဖော်ထုတ်လုပ်ကုိုင်ကြသည်။
AD.1364 တွင် ပင်းယဘုရင်မှ တုိုက်ခုိုင်းသဖြင့် စော်ဘွား၏ညီဖြစ်သူ သုိုချည်ဘွား (Sao Hsam Long Pha) သည် စစ်ကုိုင်းကုိုတုိုက်သည်။ မကူညီသောကြောင့် တဆက်တည်း ပင်းယကုို တုိုက်၍ ဘုရင် မုိုးကောင်းသုို့ ခေါ်ဆောင်သည်။ မှန်နန်းတွင် မောပါနရသူ ဟုခေါ်သည်။ ထုိုနှစ်တွင် သတုိုးမင်းဖျား အင်းဝ ကုိုတည်ထောင်သည်။
AD.(1413-1445/6) တွင် မုိုးကောင်းစော်ဘွား (စော်ဘွားဟူသော စကားသည် သျှမ်းလုို စောက်ဖှ သည် မြန်မာပြန်သော မြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကုို စုိုးမုိုးသောသခင်) သုိုငံဘွား (Sao Ngan Pha/ Hso Wen Hpa) ဖြစ်သည်။ ၎င်းလက်ထက်တွင် ယူနန်အနာက်ပုိုင်းကုို ထိပါးသဖြင့် တရုတ်တုို့နှင့် စစ်ဖြစ်သည်။ မင်မင်းဆက် (Mai Dynaty) သမုိုင်းအရ ၀မ်ချီ (ဆင်ရွှေဝင်း- မှန်နန်း) စစ်သူကြီးသည်
AD(1445/6-1449) တွင် သားဖြစ်သူ သုိုချည်ဘွား (Sao Ki Pha / Chau Si Pha) သည် ဖခင်ကျဆုံးပြီး စော်ဘွားအရာကုို ရသည်။
တရုတ်တုို့နှင့် စစ်ဆက်လက်တုိုက်ခိုက်ရာတွင် ကျဆုံးသည်။
AD.(1449-?စီစစ်ဆဲ)တွင် မုိုးကောင်း စော်ဘွား အဖြစ် Si Bu Fa (Chinese-text) ဟော်နန်း ဆက်ခံသည်။
AD.(1475-?စီစစ်ဆဲ)တွင် မုိုးကောင်းနှင့် မုိုးညင်း စော်ဘွားများ စစ်ဖြစ်သည်။
AD.(?စီစစ်ဆဲ-1532)တွင် ကျွမ်းစည်စား မုိုးညှင်းစလုံး (Sawlon) (Hso Long Hpa) (Si Lun Fa-Chinese text) သည်။
မုိုးကောင်းမင်းတရားကြီးဘွဲ့ ကုိုခံယူ၍ မုိုးကောင်းစော်ဘွားအဖြစ် ဟောနန်းဆက်ခံသည်။
ညီဖြစ်သူကုို ကျမုိုင်းရာထူး (Heir Apparent) အပ်နုင်းထားသဖြင့် သားဖြစ်သူ အရွယ် ရောက်သောအခါ ဟောနန်း ပေးစရာ မရှိပေ၊ စစ်တုိုက်ရာတွင် ဗျိုင်းအာင်လံကုို အသုံးပြုသည်။ အခြားစော်ဘွား ပြည်နယ်များနှင့် ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် (Feudal Federation) ဖြင့် သျှမ်းအုိုးစည်နုိုင်ငံအား မုိုးကောင်းကုို ဗဟုိုပြု၍ တည်ထောင်သည်။
AD.(1503-1507,1518)တွင် မြေဒူးကုို၎င်း၊ (AD.1512)၌ ဗန်းမော်၊ (1520)တွင် ကလေး၊ (1522)၌ မင်းကင်း စသည့် စောဘွားများကုို၎င်း၊ (1525)တွင် စစ်ကုိုင်း၊ AD.1527တွင် အင်းဝကုို သိမ်းပုိုက်ပြီး သားဖြစ်သူ သုိုဟန်ဘွား (Thohanbwa) အား အင်းဝထီးနန်းကုို ဆက်ခံစေသည်။ AD.1532၌ သားဖြစ်သူ သုိုဟန်ဘွားနှင့်အတူ ပြည်ဘုရင်ထွေးကုို သွားရောက် ဖမ်းဆီးပြီးနောက် စစ်ကုိုင်းတွင် လွှတ်ပေးသသည်။
ယင်းမှအပြန်လမ်း အမတ်များ လုပ်ကြံခြင်းခံရသည်။
AD.1543တွင် အင်းဝ ဘုရင် သုိုဟန်ဘွား လုပ်ကြံခံရသည်။ AD.1555တွင် မုိုးကောင်းစော်ဘွားနှင့် အုန်းဘောင်စော်ဘွား စစ်ဖြစ်သည်။
AD.(1557) မုိုးကောင်းစော်ဘွား Sao Peng လက်ထက်တွင် ဘုရင့်နောင် (Bayinnaung)သည် မုိုးကောင်းအပါအ၀င် သျှမ်းပြည်အားလုံးကုို သိမ်းသွင်းသည်။ စော်ဘွား Sao Peng ကုိုပင် စော်ဘွားအရာ ဆက်ပေးသည်။
18-ရာစု ကုန်းဘောင်းခေတ်တွင် အာသံ (Ahom)၊ ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း (Hukawng Valley)နှင့် ခန္တီးလုံဒေသ တုို့ကုို မုိုးကောင်း စော်ဘွား Chow Ta Khuen Meng ကစုစည်း၍ “Kingdom of Nora” ကုိုထူထောင်သည်။
AD(1761-1777) တွင် စော်ဘွား စောရွှေမော်၏သား စောဟော်ခန်း (Haw Hseng)က ၁၆ နှစ်ဖြစ်၏
AD(1761-1783)တွင် စော်ဟော်ခန်း၏ ညီစောခုိုင်သည် ဟော်နန်းသက် ၆နှစ်တွင် ဖယ်ရှားခံရသည်။
AD(1783-1787)တွင် စောဝျံခံသား စောဖြူက ဟော်နန်းသက် ၄နှစ်ဖြစ်၏
AD(1787-1795)တွင် စောဖြူညီ စောကျော်က ဟောနန်းသက် ၈နှစ်ဖြစ်၏ AD(1795-1810)တွင် စော်ဟော်ခန်း၏ညီ စောခုိုင်သည် မုိုးကောင်းဟော်နန်းကုို သား၊ မြေးများ အကူညီနှင့် ပြန်ဆက်ခံသည်။ ၎င်းလက်ထက်တွင် တတိယမြောက်မုိုးကောင်းမြို့ ပျက်စီးသည်။ လွှဲလော ရွှေကျောင်း ဆရာတော်၏ လက်ရေးမှုအရ ယင်းနေရာ မုိုင်းကောင်း၊ ကားမုိုင်းလမ်းနှင့် မြစ်ကြီးနား၊ မန္တလေး ကားလမ်းဆုံရာတွင် ဖြစ်သည်။ ယနေ့တုိုင် မုိုးကောင်းမြို့ဟောင်းဟု ခေါ်ဆုိုနေကြပါသည်။ ယခုမုိုးကောင်းနှင့် ၈မုိုင်ခန့်အကွားတွင်ရှိသည်။ မုိုးကောင်းစော်ဘွား ၂၉ ဆက် ဆက်ခဲ့သည်။
၁၂ နှစ်ကြာသော စော်ဘွားမရှိခဲ့ပေ။
AD(1822-1827)တွင် စော်ဘွားခွန်ကောင်းဆုိုင် (စောငန်းမုိုင်းလုံ)က ဘုရင်မှပေးသော စောဆုဆုင်ခက်ဘွ ဘွဲ့တော်ဖြင့် လက်ရှိ မုိုးကောင်းမြို့ကုို တည်၍ ဟော်နန်းပြန်စုိုက်ခဲ့သည်။
၎င်းစော်ဘွားလွန်သော စော်ဘွားဆက်ပြတ်ပြီး မြို့ဝန် (၅၄ ဆက်) ကုို မြန်မာဘုရင်က တုိုက်ရုိုက်ခန့်ထား အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ AD(1883)တွင် စော်ဘွား စော်ဟော်ခန်း၏ အဆက်အနွယ်မှ မောင်ရွှေလီ ဦးဆောင်၍ ပုန်ကန်ရာ တိုိုင်းလျဲန်မျိုးနွယ် ၀န်းသုိုစော်ဘွား ဦးအောင်မြတ် နှိမ်နှင်းနုိုင်သဖြင့် သုိုဟုံဘွားဘွဲ့ကုို သီပေါဘုရင်မှ ချီးမြင့်ပေးအပ်သည်။ ထုိုသုို့နှိမ်နှင်းမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနားဒေသတွင် တုိုင်းလျှဲန်ရွာများ ဖျက်ဆီးခံထား ရပြီး
AD.(1890) တွင် အင်္ဂလိပ် စစ်မှတ်တမ်းများအရ တုိုင်းလျှဲန်ရွားပေါင်း ၁၈ ရွာကျန်ရှိနေသည်။
အထက်မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော ဒေသခံသျှမ်းအမျိုးအနွယ် များမှာ တိုင်းလျဲန် (သျှမ်းနီ) တိုင်းခန္တီး (ခန္တီးသျှမ်း)၊ တိုင်းနေ (သျှမ်းတရုတ်)၊ တိုင်းလုံ (သျှမ်းကြီး) တိုင်းဂဒူး၊ တိုင်းဂဏန်း၊ တိုင်းဖွန်း၊ တိုင်းဆာ(ခေါ်) မိုင်းသာသျှမ်း တို့ဖြစ်သည်။ တုိုင်းလုံ (သျှမ်းကြီး) မှလွဲ၍ ကျန်အားလုံးတုို့ တုိုင်းလျဲန်အုပ်စုဝင် များပင်ဖြစ်သည်။
မိုးကောင်းမြို့ကို ရှေးယခင်းက မိန်းကောင်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ “မိန်းကောင်း” (Ming Gawng) သျှမ်းဘာသာ စကားဖြစ်သည်။ မိန်းသည်= မြို့တော် ဟုအဓိပ္ပါယ် ရပြီး ကောင်းမှာ = အိုးစည် ဟုအဓိပ္ပါယ် ရသဖြင့် မိန်းကောင်း ကို“အိုးစည်မြို့တော်” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ ကာလကြာ လာသောအခါ “မိန်းကောင်းမှ မိုးကောင်းဟုို“ တွင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မိုးကောင်း လေးကြိမ် လေးနေရာ ပြောင်း၍ တည်ခဲ့ ကြောင်းမှတ်တမ်း များအရ သိရသည်။ ရှေးလူကြီးများ၏ ပြောကြားချက်ကို ဆက်စပ်ညှိနှိုင်း မှုအရ ပထမ မိုးကောင်းမြို့၏တည်နေရာမှာ သျှမ်းဘာသာ စကားအရ ပူကမ်းမြို့ ခေါ်သော ကားမိုင်းမြို့ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ မိုးကောင်းမြို့ ၏တည်နေရာမှာ ကားမိုင်းမြို့အနီး ပတ်လှော် နေရာဖြစ်သည် ဟုဆိုပါသည်။
တတိယ မိုးကောင်းမြို့ ၏တည်နေ ရာသည် ယခုမြို့ဟောင်းနေရာ ဖြစ်ပြီး၊ စောဘွားကြီး ခွန်ကောင်းဆိုင်း ကတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့အမည်မှာ “မိန်းကောင်းဆိုင်း” ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းကန် ပုထိုးများဖြင့် ထင်ရှားပြီး ဘာသာ သာသနာ ရောင်ဝါ ထွန်းလင်းခဲ့ပါသည်။
ညောင်ရမ်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် ကောဇာ(၉၆၁) လက်ထက်တွင် “တတိယ မိန်းကောင်း (မိုးကောင်း)” ပျက်သုန်းခဲ့ပါသည်။
စတုတ္ထမိုးကောင်းမြို့ကို ကောဇာ(၁၁၅၃)ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း (၁၂)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ နံနက် အာရုဏ်တက် ချိန် တွင် မြို့ဟောင်း စော်ဘွားကြီး၏သား စောက်မောင်ဆိုင် နန့်ရင်းချောင်းနှင့် နန့်ကောင်းဆုံရာတွင် မြို့စတင် တည်ခဲ့ပါသည်။ မိုးကောင်းမြို့သည် ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၁၅၃)ခုနှစ်ကို မှတ်သားရ လွယ်ကူ စေရန် “အိမ်အောက်မြစိမ်း မိုးကောင်းကိန်း” ဟုစပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။
ရာဇ၀င်မှတ်တမ်းများ၌ တွေ့ရသော သိုဟန်ဘွားမင်းစော(ဆိုခန်ဖှ) သည်တစ် ဦးတည်း မဟုတ်ဘဲ နာမည်တူများ (ဆိုမိသားစုမင်းမျိုးနွယ်စုဝင်များ) ဖြစ်ကြပြီး၊ သက္ကရာဇ်ကာလအားဖြင့် ကွဲပြား၏။ နန်ချို သျှမ်းဧကရာဇ်မင်းဆက်(AD 650-1252 ) နှောင်း၌တစ်ဦး၊ မောသျှမ်းတိုင်းပြည် စယ်လန့် ဧကရာဇ် မင်းဆက်(AD 1300-1772 ) ၌တစ်ဦး၊ မိုးညှင်းမင်းတရားကြီး စ၀်စောလုံ၏သား အာဝနန်းရှင် သိုဟန်ဘွား (AD 1505-1547 ) ကတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အားလုံးသည် “ဆို” မင်းနွယ်ဝင် များမှ ဖြစ်ကြပါသည်။
နန်ချို ဧကရာဇ် (ရှစ်ရာစု) လည်းရောက်ခဲ့သည်။ (AD 1321 ) ကာလ၊ မောသျှမ်းဧကရာဇ် သိုဟန်ဘွားကိုယ်စား သူ၏ ညီတော် စ၀်ဆမ်လုံး သွားရောက်ခဲ့သည်။ အသွားအပြန် ခရီးသုံးနှစ် ကြာခဲ့သည်။ စ၀်ဆမ်လုံသည် အပြန်ခရီး မိုးကောင်း(Mong Kong )၌ တစ်ထောက်နားစဉ် အဆိပ်မိ၍ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူ၏နောက်လိုက် စစ်တပ်ဗိုလ်ပါ ပေါင်းသည် မောသျှမ်းဧရာဇ်ပြည် စယ်လန့်သို့မ ပြန်ကြတော့ဘဲ ယခုရောက်ရှိ သျှမ်းတွေရှိရာ နေရာ၌ပင် မြို့တည်လယ်လုပ်၍ နေထိုင်လာကြတော့သည။ယခု မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မိုးမိတ်၊ ၀န်းသုို ဟုခေါ်တွင်လျှက်ရှိသော သျှမ်းမျိုး နွယ်စုများ၏ မြို့ပြ နုိုင်ငံငယ်များသည် နှစ်ပေါင်းသုံးထောင် နီးပါးရှိပြီ ဖြစ်သဖြင့် ဤနယ်ဒေသတုို့ သျှမ်းမျိုးနွယ်စု များဝင်ရောက် နေထုိုင်လာခဲ့သည် မှာလည်း နှစ်ပေါင်း သုံးထောင်ထက် မနည်းတော့ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။
<-- စ၀်ဆန်လုံ အရုိုးအုိုးစေတီတော် မုိုးကောင်းမြို့နယ် နမ္မတီးမြို့
အာသံသည် ဗမာဧရာဇ်၏ စောင့်ရှောက်ခံ နေရသည့်ကာလ ရှိပါသည်။ သျှမ်း ဧရာဇ်များ၏ စောင့်ရှေက်ခံနေရသည့် ကာလက ပို၍များပါသည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသဖြစ် သော အာသံ (ဝေသာလီကြီး) သို့ မောသျှမ်း ဧကရာဇ်များ သူ့ခေတ်နှင့်သူ ရောက်ခဲ့ကြသည်။
စာရေးသူ ကျားပေါက် ငယ်စဉ်က ယခုမုိုးကောင်းမြို့ ဘုံသားကျောင်း ဆရာတော် ဦးမေဒါမှ ကြီးမှုး ကျင်းပသော မုိုးကောင်းမြို့ ရာတုလေးလီ ရာလေးလီ ပွဲတော်ကြီးတွင် ရှင်လောင်း အပါးတထောင်ကျော် ရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲတော်ကြီး ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။
အထက်မြန်မာနုိုင်ငံရှိ ရှေးဟောင်းမြို့ပြ နုိုင်ငံငယ်များ၊ ရှေးဟောင်း သျှမ်း မင်းပြည်ထောင်များ ဖြစ်သော တကောင်း၊ မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မုိုးမိတ်၊ ၀န်းသုို၊ ကလေး၊ မော်လုိုက်၊ ဟုမ္မလင်း၊ မောင်းခမ်း၊ တမန်သီ၊ သောင်သွတ်၊ ဆင်းကလိန်း ခန္တီး၊ ဗန်းမော်၊ ခတ်ချို၊ ၀ုိုင်းမော်၊ ခမ်းတီးလုန် (ပူတာအုို) ဖားကန့် ၊ ကားမုိုင်း စသည့် အမည်များမှာ ဒေသခံ သျှမ်းလူမျိုးများ အစဉ်ဆက် သျှမ်းဘာသာဖြင့် အမည်သတ်မှတ်ခေါ်တွင် ခဲ့သည်ကုို တွေ့ရှိရပါသည်။
သျှမ်းညီနောင်သုံးဦး တည်ထောင်ခဲ့သော မြို့သုံးမြို့တွင်း မိန်းကောင်း ခေါ် မုိုးကောင်းမြို့သည် အကြီးဆုံး မြို့ဖြစ်ပြီး အရံမြို့ငယ် ၉၉ မြို့ရှိကြောင်းသိရသည်။
ရှေ့ခေတ်သျှမ်းလူမှုအဖွဲ့စည်း သျှမ်းနုိုင်ငံတော်များ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံ မုိုးကောင်းမြို့ တောင်ပေါ်ကျောင်း ဆရာတော်ကြီး က သက္ကရာဇ် ၁၂၆၃ ခုနှစ် ပထမ၀ါဆုို လဆန်း ၄- ရက်နေ့တွင် စတင်ရေးသားသည့် ဥတ္တရဂုရုဥတီရဌ ခေါ် မောကုိုးပြည်ထောင် သမုိုင်းမှတ်တမ်းတွင်
- အနောက်ပုိုင်း နုိုင်ငံတော်တွင် နေထုိုင်သော တုိုင်းလျဲန်ခေါ် သျှမ်းနီတုို့သည် ညီအကုို သုံးဦးတွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး စစ်တုိုက်ရာတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး နီသွေးသော သတ္တိနှင့်ပြည့်စုံပြီး၊ အသားအရောင် အနည်းငယ်လတ်၏ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ ခေါင်းပေါင်း အနက်ရောင် ၀တ်ဆင်ကြသော်လည်း အနားပတ်မှာ အနီရောင်တပ် ၀တ်ဆင်ပြီး၊ ခေါင်းပေါင်း၊ ခါးဆီးကြိုး အနီရောက်ကုိုသာ ၀န်ဆင်သည်။ အထူးသဖြင့် စစ်တုိုက်ရာတွင် ထူးချွန်သော နီရဲသော သတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသောကြောင့် တုိုင်းလျဲန် အမည်တွင်လေသည်။
သျှမ်းနီလူမျိုးများ စစ်တုိုက်ထွက် အက
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံမှုကြမ်း ရေးဆွဲစဉ်ကာလက ဦးစောထွန်းရင်သည် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တိုင်းလျဲန်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသား တဦးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ပုဂ္ဂိုလ်သည် လူမျိုးတမျိုးဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆုိုနုိုင်သည့် အမျိုးသားလက္ခဏာများဖြစ်သော နေထုိုင်ရာ တဆက်တည်းသောနယ်မြေ၊ တူညီသော သမုိုင်းအစဉ်အလာ၊ တူညီသော အခြေခံစီးပွားရေး စသည့် အချက်များနှင့် ပြည့်စုံသော အထက်မြန်မာနုိုင်ငံ ဧရာဝတီနှင့် သလ္လာဝတီ (ချင်းတွင်း) မြစ်ရုိုးမြေပြန့်ဒေသရှိ သျှမ်းမျိုးနွယ်ဝင်များ၏ နယ်မြေကုို စုစည်း၍ ပြည်ထာင်စုအဖွဲ့ဝင် မြေလပ်သျှမ်းပြည်နယ် (တုိုင်းလုိုင် ပြည်နယ်) သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲရေး ကော်မရှင်သုို့ ၁၂. ၂. ၇၂ ရက်နေ့စွဲပါ စာတမ်းဖြင့် တရားဝင် အဆုိုပြုတင်ပြခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးထွန်းရင်အား နုိုင်ငံတောသစ္စာဖောက် ပုန်ကန်မှုကျုးလွန်သည်ဟု ၆. ၁. ၇၆ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးအရှေ့တောင်မြို့နယ် တရားရုံးမှ စိရင်ဖြတ်၍ ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်း ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကုို မကျေနပ်၍ ဗဟုိုတားရုံး (မန္တလေးရုိုးထုိုင်) သုို့ အယူခံခဲ့ရာ ဦးထွန်းရင်သည် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းသုို့ သွတ်သွင်းသတ်မှတ်ခြင်းခဲ့ရသော သျှမ်းနယ်များကုို စုစည်း၍ (မြေလတ်) သျှမ်းများအတွက် ပြည်နယ်သစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တင်ပြတောင်းဆုိုခြင်းမှ ဥပဒေဘောင်အတွင်း မှတင်ပြ ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ ဤကဲ့သုို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် နုိုင်ငံတော်ကုို သစ္စာဖောက် ပုန်ကန်သည် ဟုမဆုိုမနုိုင်ကြောင်း ဗဟုိုတရားရုံးမှ သုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
ဦးထွန်းရင် အပါဝင် ဦးစိန်တုိုး၊ ဦးထွန်းဖေ တုို့အား ၁. ၄. ၇၇ ရက်နေ့တွင် ဗဟုိုတရားရုံးမှ အပြီးလွတ် ခဲ့ပါသည်။ ( ၁. ၄. ၇၇) ရက်နေ့စွဲပါ ၁၉ ၇၆ ခုနှစ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံမှုအမှတ် - ၁ ဗဟုိုတရားရုံး (မန္တလေး ရုံးထုိုင်)၏ စိရင်ချက် မိတ္တူမှ ကောက်နုတ်ချက်)
အင်္ဂလိပ်ကုိုလုိုနီခေတ်တွင် သူကျွန်မခံလုိုသော သျှမ်းနီမျိုးချစ် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ
ဗုိုလ်ဖုိုးစောနှင့် မြန်မာပြည်မြောက်ပုိုင်းအင်အားစု *"۩"*
၀န်းသုိုစော်ဘွားကြီး စ၀်အောင်မြတ် *"۩"*
မင်းသား စောရန်ပုိုင်နှင့် စောရန်နုိုင် *"۩"*
မိုးလှိုင်း စော်ဘွားကြီး စ၀်ခမ်းလှိုင် *"۩"*
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သျှမ်းလူမျိုးများ *"۩"*
ပင်လုံမှလာသော မီးပွား *"۩"*